Ankatoky ny fifidianana : Milalao fiangonana i Andry Rajoelina -
AccueilSongandinaAnkatoky ny fifidianana : Milalao fiangonana i Andry Rajoelina
Tsy filoham-pirenena amperin’asa, tsy mpiasam-piangonana na raiamandreny manana asa ao amin’ny fiangonana, tsy mpitety fiangonana mpanao asa soa, saingy kosa mpilatsaka ho fidiana i Andry Rajoelina ka mitady ny fon’ ny mpino indray. Io no nahitana ny filohan’ ny Tetezamita teo aloha, ary voalaza fa antony nanatrehany ny lanonam-pitokanana ny vondrona episkopaly atsimo sy ny fametrahana ny vato vehizoro, ao anatin’ny diosezin’i Miarinarivo , ankoatra izay ny fanokafana ny fankalazana ny tsingerintaona faha-115n’ny Ekar Notre Dame de Lourde, Soavinandriana. Dia ho sanatria ve tambazan’ i Andry Rajoelina indray ny fiangonana, raha toa tsy nanao izany ny tenany teo aloha, marihina etoana fa efa namotika ny fiangonana izao fomba fiady mantsina izao. Satria tsy ilay fanamafisana ny finoana no tena antony, fa kosa paikady politikam-pifidianana rano fotsiny. Manamarina izany rahateo ny fahavakisan’ny fiangonana, noho ny fidiran-dRavalomanana Marc tamin’ izany, izay mbola hita etsy sy eroa ny takaitra amin’ izany. Tsy fianatra io satria hita ny vokany ka tsy tokony hirosoan’ ny mpanao politika akory, ny fiangonana mahazo aloha dia faly saingy lasa fitaovan’ilay mpanao politika izany afaka fotoana fohy. Potehany rehefa any aoriana any raha tsy mahafa-po ny vokatra. Aoka izay ny fampiasana fiangonana.
Anisan’ny nanaitra izao ny kabary izay nataon’ i Andry Rajoelina tany an-toerana, satria dia nomarihiny ny hoe “manorina sy manangana ny kristiana katolika, tsy maintsy atao ny fifanomezan-tanana, ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra”. Antso mivantana ho an’ ny katolika io nataon’ dRajoelina hoe manome ao dia manome sy mahay mamaly koa ianareo, satria izay ilay hoe fanomezan-tanana, dia ho sanatria koa ve hisy ho any amin’ ny fiangonana hafa dia hilaza izany hafatra mampifandrafy izany. Aoka ho mailo ny fiangonana mba tsy hidiran’ny politika, satria dia efa fitaovana izy izao. Any aoriana any dia hoe izahay pasitera Maihol fa ianareo Andry Rajoelina na koa izahay Ravalomanana dia miaraka amin’ny fiangonana izao sy izao. Ny azo hinoana aloha dia tsy ny fiangonana mihitsy no andeha hiroboka amin’ny zavatra maloto tahaka izao fa ireo mpanao politika no manao kajikajy, ka sanatria ho tonga any amin’ny fifandrafian’ ny fiangonana no hiafarany. Aoka ho samy mailo ny rehetra satria dia fitaovana ihany no heverin’ireo mpanao politika ny fiangonana, fa tsy sanatria akory tena fanampiana amin’ ny fo, ka na dia ny fampanantenana natao aza tsy ho tadidy intsony rehefa tonga aminy tanjony izy ireo.
Mitohy hatrany ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, miaraka amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ireo faritra maro manerana ny Nosy taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo teo. Namela takaitra maro tamin’ny faritra maro mantsy i Enawo ary mavesatra ...Tohiny